Thoughts ofaSeagull: July 2008
ဇင်ယော်လေးတစ်ကောင်ရဲ. ခိုနားနေကျ ဆိပ်ကမ်းလေးကနေ ကြိုဆိုပါတယ်။ ဇင်ယော်လေးလည်း လေပြင်းမုန်တိုင်းဒဏ်၊ရာသီဥတုဒဏ် တွေကနေခိုလှုံဖို. ဒီဆိပ်ကမ်းလေးကို ရှာတွေ.ထားတာ သိပ်မကြာသေးတာမို. ဒီဆိပ်ကမ်းလေးအကြောင်းကို ကောင်းကောင်းမသိသေးပါဘူး။ တကယ်လို. ဧည်.၀တ်မကြေတာများရှိခဲ.ရင် ခွင်.လွှတ်ပေးဖို.ကြိုပြီးတောင်းပန်ပါတယ်။ ဒီဆိပ်ကမ်းလေးမှာ သက်တောင်.သက်သာနဲ. ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ.စွာ အပန်းဖြေအနားယူနိုင်ပါစေ။
I created this blog to share the happiness of seagull and funs, knowledges, even sorrow. Pls imagine that whataseagull will think and what will make him happy?.. Think about the life ofaseagull... sometimes flying with the fresh breeze, rest on the crest of the wave, looking for his meals (fishes), searching his soul mate ( partner seagull )....but sometimes struggled at the heavy weather, try to guide the seafarers to the nearest land. The facts which I like the seagull... he never left the sea & always stay at the sea or coastal areas...( his loyalty of the living environment ).. My moto is.."keep on flying .. try to fly high" ..One day, there is bright shining sunrays waiting foraflying high and trying hard seagull.
Posted by ဇင်ယော် at 4:02 AM Links to this post3comments